Ny fiainan'ny mpamorona sary ao anatin'ny iray minitra | Famoronana an-tserasera
Ny tontolon'ny famolavolana dia manana ny lafiny maiziny dia tsy zava-baovao, saingy tsy azontsika lavina fa ny fiainan'ny mpamorona sary rehetra dia tsy azo ihodivirana fotoana mahatsikaiky. Azo antoka fa raha manolo-tena ho an'ity tontolo ity ianao dia niaina toe-javatra maro izay tsy hohadinoinao. Androany aho te hizara aminareo ny famerenana ny tena zava-misy marina (amin'ny teny ankapobeny, eny) amin'ny karazana fifandraisana izay matetika misy eo amin'ny matihanina sy ny mpanjifa. Ity dia horonan-tsary izay mamaritra amin'ny fomba tena mahasarika ireo olana sy mpamatsy loha izay manenjika ny mpamorona mandritra ny fizotrany sy ny famelabelarana ny sanganasa.
Na dia matanjaka aza ny toa azy, indraindray ny miresaka mahomby amin'ireo mpanjifantsika dia mety ho sarotra kokoa noho ny fampivelarana ilay tetikasa resahina. Voalohany indrindra, manomboka eto aho dia mamporisika anao hiatrika an'ity karazana toe-javatra ity amin'ny hatsikana mety indrindra, na dia eny, miaraka amin'ny fetra sasany aza. Ny zavatra mahazatra dia ny mahita olona mahatakatra sy manaja isika, saingy mety hisy ihany koa io fotoana io izay tokony hiatrehantsika olona betsaka na tsy mahafinaritra. Amin'ireny tranga ireny dia tsy tokony hadinointsika izany Zonay ary ny fetranay na dia averiko aza, manandrana mamaha olana madinidinika amin'ny tontolo milamina indrindra azo atao.
Raha tsy misy lazaiko bebe kokoa dia avelako ho anao ilay horonantsary, azoko antoka fa hanome anao mihoatra ny fihomehezana fotsiny izany. Mahatsiaro ho fantatra amin'ity horonan-tsary bitika ity ve ianao? Raha izany dia ampahafantaro ahy ao amin'ny fizarana hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fiainan'ny mpamorona sary ao anatin'ny iray minitra
Tsy hitako ilay horonan-tsary, efa nesorinay i Flash tao amin'ny birao. :-(
Eny eny, indraindray dia toy izany ... Aleo alaina amin'ny hatsikana!
Ny zavatra tsara indrindra dia rehefa miteny tsotra izy ireo hoe: omeo izany;)
Tena tsara, nitranga tamiko imbetsaka izany.